Semalt Expert Explains, Why You Mobile Marketing For Your Business Should Note
Ny teknologische Verbreitung im 21. Jahrhundert dia nanova ny fomba nentim-paharazana, toy ny fiainana andavanandro. Raha ny marina, ny Akzeptanzrate für Mobilgeräte 2016 dia 80% amin'ny Smartphone-konversionrate amin'ny 64% - angebotsschreiben vorlage. Ny vokatra dia nivarotra ny mpivarotra ao amin'ny Digital Sphere, ka ny mpivarotra mety ho an'ny mpivarotra sy ny mpandray anjara. Noho izany, ny SEO-Marketing-Strategien dia noraisina ho amin'ny fotoana farany.
Der Expert von Semalt Digital Services, Oliver King, manazava ny antony dimy mahatonga ny Marketingstrategien mobil-freundlich werden sollen.
1. Ny Zeitaufwand für mobile Geräte
Nur im Jahr 2016 verbringt die durchschnittliche amerikanische Staatsbürger jeden Tag mindestens 10 Stunden online und bevorzugt Mobiltelefone und Tablets anderer Geräte. Ny fotoana manontolo amin'ny Internet, izay an-tserasera an-tserasera an-tserasera an-tserasera, dia maharitra 500 ora an-tranomaizina ary manome vaha-olana ho an'ny orinasa goavana ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa tsy misy ny risika, ny manelingelina ny fiainany isan'andro sy ny fiainany isan'andro. Noho izany, ny fampiroboroboana ny Mobile Marketing dia ahafahana mahazo ny fampiroboroboana ara-tsosialy sy ara-tsosialy sy ara-toekarena ary mifantoka amin'ny fotoana mety amin'ny fampidirana ny vokatra sy ny fivarotana.
2. App Store dia ny Paradies der Käufer
Ireo mpanamboatra fitaovam-piasana mora kokoa amin'ny mobil-friendly Sites. Ireo tranonkala ireo dia afaka mifidy ny mpanjifa mba hanatsarana ny karamany, ny fandoavana sy ny fandoavana ny saram-pandehanan-tsolika sy ny zavatra ilaina avy amin'ny findainy..Ny Marketing Manager dia manatanteraka ireo asa rehetra ireo, mba hahafahan'ny Digitalisierungsstrategien afaka manoratra.
Raha mampiasa marketing strategiques ianao, te hanadino ny vohikala ary hameno ny isan'ny mponina betsaka indrindra. Ny mpitsidika dia afaka manohana ny tombotsoany, izay mitarika mivantana ny vokatra. Ny fahafaham-pon'ireo fitaovam-pihetseham-pihetseham-po amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny demografika dia manome fahafaha-miditra amin'ny fivoaran'ny sehatra marobe. Ny fampiasana azy, ny fahamendrehana sy ny fahatsaram-pon'izy ireo dia mampihomehy ireo fitaovana ireo ny tompony sy ny mpampiasa azy. Ny mpamokatra fitaovana maoderina dia miezaka hatrany hanatsara ny toetr'andro voalaza etsy ambony mba hanatsarana ny vokatra. Araka ny tokony ho izy, ireo mpampiasa dia hampiasa izany fahafaha-miditra malalaka izany mba hahatratrarana ny tanjon'izy ireo.
4. SMS Opening Hours are More Than E-Mail
SMS-Functions (SMS Message Service) ao amin'ny Mobilgeräten ahafahan'ny tompony mamokatra sy mamaky vaovao ao anatin'ny 3 segondra. This open quote lies at around 98% and makes SMS the best platform to reach potential customers in comparison with email marketing and other targeted platforms. Amin'izao fotoana izao, ny mpividy rehetra dia tokony hampitombo ny vidin-tsolika, ny fampahafantarana sy ny vaovao informatika, ary ny fampihetseham-po amin'ny mpanjifa mahomby ary hampiroborobo kokoa ny fikarohana momba ny orinasa na ny vokatra.
5. E-Commerce dia manana mari-pamantarana ara-barotra amin'ny finday
Jene Businesseinheit, groß oder klein, dia misy ankehitriny ny fampiharana finday mora ampiasaina mba hamenoana ny tranokalany. Izany dia amin'ny E-Commerce-Giganten toy ny Amazon sy eBay. Ireo sehatra ireo dia ahafahan'ireo orinasa mampiasa ny SEO sy ny Marketing Content mba hampahafantarana ny vokatra sy ny serivisy, ny famoahana ny vokatra ho an'ny vokatra ary ny fivarotana amin'ny seha-potoana amin'ny fotoana voafetra ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fampidirana ireo fitaovana elektronika amin'ny fiainantsika isan'andro dia mihamitombo hatrany, raha toa ka miezaka ny gadgets mba hanafenana ireo zavatra hafa. Amin'ny fampiasana ny Digital Marketing sy ny Marketing ho an'ny SEO-Markets, hampiasa fampiasa finday sy fampiroboroboana finday, ny mpampiasa nomerika digital.